Beekommii URL ofumaan dhaamsuu
Beekuma URL ofumaan dhaamsuu
Yommuu barruu galchitu, LibreOfficeiin tarii jechicha URLofumaan hubachuu fi jechicha geessituutiin bakka buusa. LibreOffice amaloowwan (halluu fi jala harriquu) bocquu sirriitiin geessituu kanneen amaloonni isaanii akaataalee arfii muraasa irraa argaman dhangeessa.
Yommuu ati barreessaa jirtuu LibreOffice ofumaan URLs akka beeku yoo hin barbaanne tahe, amaloota kana dhaamsuuf karaan hedduun jira.
Gaabbi Beekommii URL
Yommuu barreessituu fi barruun ofumaa gara geessituutti jijjiiramuu isaa hubattu, AjajaCtrl+Z dhangeessa kana gaabbi dhiibi.
Jijjiiraa kana hamma eegereetti hubaachuu yoo baatte, geessituucha filitii ajaja baafataa filadhuDhangii - Dhangeessaa Durtii.
Gaabbi beekommii URL dhaamsuu
Gosa galmee beekommii URL fooyyessuu kanneen barbaadduu fe'i.
Galmeewwan barruutiif beekommii URL fooyyessuu yoo barbaadde, galmee barruu bani.
Meeshaalee - OfiinSirreessaa fili.
OfiinSirreessaa qaaqa keessaa, Dirqala caancala fili.
YooBeekommii URL mallatteessuu baatte, jechoonni ofumaan geessituutiin bakka bu'amuun isaanii ni hafa.
Barreessaa LibreOffice keessa sanduuqonni filannoo lama fuuldura Beekommii URL jiru. Akka ati barreessituun sanduuqni tarjaa jalqabaa keessaa bood-gulaaluu boodaatii fi sanduuqni tarjaa lammaffaa keessaa OfiiSirreessaa oola.
OfDhangi'aa fi OfiinSirreessaa Dhaamsuu
Title is: Beekommii URL ofumaan dhaamsuu